Eva Krbdk, onye na-ese egbugbu | Igbu egbugbu
Nzukọ ndị na-egbu egbugbu: Eva Krbdk
Naanị awa ole na ole gara aga, mgbe m na-eme nchọgharị na Tumblr na-ele ụdị ụdị egbugbu ọ bụla, ahụrụ m ụfọdụ atụmatụ ndị dọtara uche m ngwa ngwa n'ihi nri, ịma mma na ibi ndụ ha zigara. M ngwa ngwa malitere nnyocha na onye na-eme anwansi onye nọ n'azụ ihe ndị a ma nye ya, ya na, Eva Krbdk. Onye ama ama ama ama na Turkey.
Ọ bụ ezie na na mbụ A zụrụ Eva Krbdk na Istanbul (Turkey), na-egbu egbu ugbu a na studio na New York (United States). Characteristicdị njirimara ya na ngwa ngwa a na-amata ngwa ngwa emeela ka ọtụtụ ndị kpebie ijide na akpụkpọ ha ụfọdụ ala ndị Eva maara otú e si eme nke ọma, na-ejikọta ụdị na usoro dị iche iche dị na ejiji.
Na nke ahụ nwere ike ịbụ otu n'ime isi ihe kpatara Eva Krbdk na-ewu ewu (ihe akaebe nke ha bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde ụmụazụ na Instagram). Naanị lee ngwa ngwa anya na tattoos nke Eva Krbdk mere iji ghọta na o jisiri ike ịchọta nguzozi zuru oke n'etiti ụdị dị ka nke oge a «Watercolor» na nsiridi.
Na mgbakwunye, na nsogbu nke iji ihe karịrị otu usoro, anyị nwere oghere oghere. Onye na-ese ihe eji egbu egbu na Turkey nwere ike ịmepụta egbugbu na nnukwu nkọwa zuru ezu n'agbanyeghị obere obere ha. Ọ bụ ezie na ọ ga-esiri ike ịhọpụta onye na-ese egbugbu a, ma anyị nwere ike ichere ka ọ hụ ya site na ụfọdụ ngosi ngosi egbugbu kachasị dị na Europe iji mee ihe omume ahụ.
Eva Krbdk Tattoo Foto
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ndị na-ese egbugbu » Nzukọ ndị na-egbu egbugbu: Eva Krbdk
Gịnị bụ ihe kasị sie ike igbu
Ezigbo echiche: ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akwado ndị na-achịkwa egbugbu